AirPods-ka cusub ee 3 wuxuu bilaabi doonaa wax soo saar inta lagu guda jiro rubuca saddexaad ee sanadka | Waxaan ka socdaa mac
Sida laga soo xigtay ilo ku dhow dhow khadadka wax soo saarka, Alaab-qeybiyaha Taiwanese ASE Technology ayaa bilaabay soo saarista baaxada leh dareemayaasha indhaha ee jiilka soo socda ee AirPods oo loo gudbin doono laguna xaman doono AirPods 3.
Waxay umuuqataa in AirPod-yadaan ay iska caabinayaan xoogaa in labilaabo waana inbadan oo naga mid ah ay filayeen in Apple uu qaban doono inta lagu guda jiro bishan Maarso, oo ay weheliyaan iPad-ka iyo alaabada kale laakiin waxwalba waxba kuma tarin. Midkoodna AirPods ama iPad iyo soo bandhigidduba sidan ma ay samayn markaa waa inaan sugnaa inaan aragno waxa ugu dambeyn ku dhacaya AirPod-yadaas.
Sida ku xusan warbixinta ay baahisay DigiTimes, alaab-qeybiyaha wuxuu diyaarin lahaa Apple's AirPods cusub oo diyaar ah rubuca saddexaad ee sanadkan. Xaaladdan oo kale, waa muddadii u dhexaysay Luulyo ilaa Sebtember, markaa waxay ku habboonayd warbixinno uu horay u sii daayay falanqeeye caan ah Ming-Chi Kuo.
Naqshadeynta kuwan cusub ee AirPods 3 waxaa sidoo kale jira fikrado isku mid ah inta udhaxeysa xanta iyo daadinta. Naqshadda sameecadaha dhagaha ee Apple waxay lamid noqon doontaa midka ay hadda leedahay AirPods Pro, haa, iyadoo waxoogaa isbeddel ah laga samaynayo caag ama silikoonno dhegaha loo soo gelinayo mabda 'ahaanna waxay dardaaran u dirayaan iyadoon buuq la baajin iyo lacag la'aan. Sanduuqa wireless: waxaas oo dhami waa kutiri kuteen waxaana iska cad in maalinta saxda ah ee ay suuqa imaanayso aan la garanayn.
Xanta ayaa tilmaameysa in qiimaha AirPods 3 uu la mid noqon doono kan jiilka labaad ee hadda jira ee AirPods, laakiin kani waa macluumaad kale oo sidoo kale ka baxsanaya gacmaheena maaddaama aysan jirin xaqiijin rasmi ah oo arrintan la xiriirta. Waxa ugu amniga badan ayaa ah inay sidaas tahay, inkasta oo aan waxba la xaqiijin karin xilligan.
Wadada buuxda ee maqaalka: Waxaan ka socdaa mac » Apple » Xanta » AirPods-ka cusub ee 3 wuxuu bilaabi doonaa wax soo saar inta lagu guda jiro rubuca saddexaad ee sanadka